An-kitsim-po: fotodrafitrasa tsy ampy | NewsMada
Betsaka ny fotodrafirasa nisy tany aloha, tsy nisy fikarakarana aty aoriana, potika avokoa na tsy mbola nisy mihitsy hatramin’izay. Simba izay efa mba nisy ; ny vaovao, tsy hita. Lalana, tetezana, famokarana herinaratra, seranan-tsambo, seranam-piaramanidina, lalamby, sns, tsy ampy avokoa ireo eto amin’ny Nosy, tsy mahatosika ny toekarena amin’ny faritra rehetra. Miandry famatsiam-bola avy any ivelany ny fanamboarana azy ireny, tsy vita araka ny nampanantenaina.
Amin’izao fitondrana izao, lalam-pirenena maro ny nampanantenaina, toy izany koa izao ny toeram-ponenana, ny famokarana herinaratra. Miandry ny fanombohana azy ireny ny vahoaka ankehitriny satria misy asa tsy mandeha mihitsy raha tsy vita ireny, raha tsy voajary ny seranan-tsambo, sns. Mahavelombolo ny mponina izao ny fanarenana ny lakandranon’i Pangalana. Firy taona izay, matiantoka ny mpandraharaha sy ny mpamboly noho io tsy fahafahana mampiasa lakandranon’i Pangalana io. Toy izany koa, mitsipozipozy hatry ny ela ny zotra an-dalamby FCE, Fianarantsoa-Manakara, ary tsy mandeha intsony izao, raha ny feo avy any an-toerana.
Raha tiana tokoa ny hampandroso ny toekarena, tsy maintsy homen-danja ny fotodrafitrasa. Marina fa mety ny fiaraha-miasan’ny fanjakana amin’ny tsy miankina fa ny tompon’andraikitra voalohany ny fanjakana mpanatanteraka. Miankina amin’ny tetibola.